Malunga Nathi - iShanghai Nayi Glass Co., Ltd.
Kwilizwe lokupakishwa kwezithambiso, kubaluleke kakhulu ukuba iimveliso zakho zibe nenkangeleko entle ngaphandle ukuze zihambe nomsebenzi wazo ophezulu ngaphakathi.UNayi ngumvelisi ochwepheshile wokupakisha iglasi yeemveliso zokuthambisa, sisebenza kwiintlobo zebhotile yeglasi yezithambiso, njengebhotile yeoli efunekayo, ingqayi yekhrimu, ibhotile yokuthambisa, ibhotile yesiqholo kunye neemveliso ezinxulumene noko.
Inkampani yethu ineendibano zocweyo ezi-3 kunye nemigca yendibano eyi-10, ukuze imveliso yonyaka ifikelele kwiziqwenga ezizizigidi ezi-6 (iitoni ezingama-70,000).Kwaye sineendibano zocweyo ezi-6 zokulungisa nzulu ezikwaziyo ukunika iqabaka, ushicilelo lwelogo, ushicilelo lokutshiza, ushicilelo lwesilika, ukukrolwa, ukupolishwa, ukusika ukuqonda iimveliso kunye neenkonzo zesitayile somsebenzi “esinye” kunye neenkonzo zakho.I-FDA, i-SGS, isiqinisekiso se-CE samazwe ngamazwe sivunyiwe, kwaye iimveliso zethu zonwabela ukuthandwa kakhulu kwimarike yehlabathi, kwaye zisasazwe kumazwe angaphezu kwama-30 ahlukeneyo kunye nemimandla.
Amazwe athumela ngaphandle
Sinikezela ngoluhlu olubanzi lweentsapho zemveliso kunye nokhetho olubanzi lobungakanani phakathi kwabo.Sikwabonelela ngeziciko ezihambelanayo kunye neekepusi zokuncedisa iibhotile / iingqayi, kubandakanywa ii-caps ezibunjiweyo ezikhethekileyo ezinikezela ubunzima obukhulu, ukuqina, kunye neempawu ezichasayo.Sibonelela ngevenkile yokumisa enye apho unokukhangela zonke izinto ozifunayo kumgca wakho wemveliso yeemveliso ezininzi.
Iinkqubo zokupakisha zexesha elizayo ziya kusebenza ngakumbi, zinothungelwano lwedijithali, kwaye zibe nzima ngakumbi.Sizoba kwiindlela ezintsha kunye nobuchwepheshe mihla le, sihlala siphucula izixhobo zethu zobugcisa, kwaye sigcina unxibelelwano olusondeleyo nabathengi bethu.Eyona nto siyixhalabeleyo kukuqonda iimfuno zabathengi bethu kwaye sijonge ukwanelisa iimfuno zabo. Siyakuxhasa kuyo yonke inkqubo ukusuka ekukhetheni uyilo kunye nophuhliso ukuya kuthi ga kwinkonzo yasemva kokuthengisa.
Wamkelekile ukuba ukhethe iimveliso kwiwebhusayithi yethu, okanye wabelane ngeengcinga zakho nathi, sinokukubonelela ngeesampulu.Abathengi be-Bespoke banobunjwa babo kunye nemingxuma, nkqu nezo sibenzela zona kwivenkile yethu yezixhobo ezizodwa.
UNayi ukholelwa ukuba ipakethe ingaphezulu kwenqanawa yemveliso.Ifanele ibe lulwandiso lwamava anqwenelekayo ohlobo kumthengi.Ukuba ufuna uncedo lokujonga ukhetho lwethu olubanzi, ungaze uthandabuze ukuqhagamshelana nelungu leqela lethu ngefowuni okanye i-imeyile.Abasebenzi bethu banamashumi eminyaka yamava abakhokela abathengi, kwaye bahlala bekuvuyela ukunceda.Thenga namhlanje ngazo zonke iimfuno zakho zokupakisha!
Ukwaneliseka kwabathengi, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo efanelekileyo yimishini yenkampani yethu.Ngeqela lethu eliguqukayo nelinamava, sikholelwa ukuba inkonzo yethu inako ukuncedisa ishishini lakho ukuba likhule ngokuqhubekayo kunye nathi.